हैजा के हो ? कस्ता हुन्छन् लक्षण ? बच्न के-के गर्ने ? - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
९ असार २०७९, बिहीबार १८:१३
नरेन्द्र महतारा- बर्षायाम सुरु भएसँगै सरुवा रोगहरुको जोखिम बढ्न थालेको छ । खानेपानीको मुहान नै पदूषित हुने हुँदा आउँ, हैजा, झाडापखाला, हेपाटाइटिस र जन्डिसजस्ता रोगको जोखिम अधिक हुने गरेको चिकित्सकको भनाई छ ।
काठमाडौंमा अहिलेसम्म चार जनामा हैजा भएको पुष्टि भएको छ । दुई नमुनाको हैजाको कल्चर पोजेटिभ र अरु दुइको आरडीटी पोजेटिभ आएको छ ।
अस्पतालहरुमा हैजाका बिरामीहरु थपिन थालेको चिकित्सकहरुको भनाइ छ । काठमाडौंको भोटेबहालमा पसल गरेर बस्ने एक जना, डिल्ली बजारका एक जना र बागबजारका दुई जनामा हैजा पुष्टि भएको छ ।
काठमाडौंका अस्पतालमा हैजाका मात्र होइन अन्य सरुवा रोगका बिरामीहरुको चाप बढ्न थालेको चिकित्सकहरुको भनाइ छ । पानीजन्य, हावाजन्य र किटजन्य रोगका विरामी उपचारका लागि आएको चिकित्सकहरुले जनाएका छन् ।
हेपाटाइटिस, हैजा, झाडापखाला, टाइफाइडजस्ता रोग खानपान र पानीका कारण तथा डेंगू, मलेरिया र इन्फ्लुइन्जाजस्ता रोग हावाबाट सर्ने सरुवा रोग हुन् ।
हैजाबाट बच्नका लागि उमालेको वा क्लोरिन प्रयोग गरिएको खानेपानीको प्रयोग गर्ने, दिसापिसाब पछि र खाना खानुअघि अनिवार्य रुपमा साबुन पानीले हात धुनुपर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
हैजा फैलिने मुख्य कारण खानेकुरा, पिउने पानी र सरसफाइ नै मुख्य कारण रहेको चिकित्सकहरुको भनाइ छ । काठमाडौैंमा हैजा पुष्टि भएका बागबजार, डिल्लीबजार र भोटेबहाल क्षेत्रको खानेपानीको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा अनुसन्धानका लागि टोली खटाइएको छ ।
खानेकुरा, पानी र व्यक्तिगत सरसफाइका कारण हैजा फैलिने भएकाले यी कुराहरुमा ध्यान दिन चिकित्सकहरुको सुझाव छ । व्यक्तिगत सरसफाइको अभावका कारण हैजाको संक्रमण बढ्ने भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।